ကိုဗစ် ၁၉ အတွက် Mask နှာခေါင်းစည်း ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်နိုင်မလား (အပိုင်း ၂)
This photo taken on May 8, 2020 showsaworker wearingaface mask sewing disposable surgical gowns for health workers as protection from the COVID-19 coronavirus atagarment factory in Yangon. - The factory which has switched from making clothes for exp
နှာခေါင်းစည်းထုတ်ဖို့ ကော်စေ့နဲ့ လုပ်တဲ့ ရက်ထည်မဟုတ်တဲ့ ပိတ်စ ၂ မျိုးလိုသလို ဘယ်လိုချုပ်ရတယ်ဆိုတာ ချည်မျှင်နဲ့ အထည်အလိပ်အင်ဂျင်နီယာ ဦးအောင်ဇင်က ပြောပြမှာပါ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်. ကာကွယ်ရာမှာ ထိရောက်တဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်ဖို့Polypropylene ခေါ် ကော်စေ့နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ရက်ထည်မဟုတ်တဲ့ ပိတ်စ အမျိုးအစား ၂ မျိုး (spun bond နဲ့ melt blown) ရဖိုလိုအပ် သလို ဒီပိတ်စတွေရပြီဆိုရင် နှာခေါင်းစည်းဖြစ်အောင် ဘယ်လိုချုပ်ရတယ် ဆိုတာကို Jasper Knight ကုမ္ပဏီက ချည်မျှင်နဲ့ အထည်အလိပ်အင်ဂျင်နီယာ ဦးအောင်ဇင်က ဒီတပတ်မှာ ဆက်ပြီးပြောပြပေးမှာပါ။
ဦးအောင်ဇင်။. ။“အသုံးများတဲ့ mask အမျိုးအစားက ၂ ခုရှိပါတယ်။ ခွဲစိတ်ခန်းသုံး surgical mask ဆိုတဲ့ ၃ လွှာထပ်ထားတဲ့ အချပ် အပြားပေါ့လေ၊ flat -mask အမျိုးအစား၊ face mask အမျိုးအစားပေါ့လေ။ နောက်တခုက ဘာလဲ ဆိုတော့ KN95 ဒါမှမဟုတ် N 95 ပေါ့လေ။ အဲဒီလိုမျိုး ၅ လွှာ ထပ်ပြီးတော့ တကယ့်ကို ဆေးရုံလုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးနိုင်တဲ့ mask အမျိုးအစား ဆိုပြီး ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ၂ မျိုးအတွက် ထုတ်လုပ်ဖို့ စက်တွေ ရှိပါတယ်။
မေး။. “ဟုတ်ကဲ့ ပြည်တွင်းမှာ mask ချုပ်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် သူ့ရဲ့နည်းပညာ ကရော ဆရာ၊ ဘယ်လိုနည်းပညာသုံးရပါလဲ။”
ဦးအောင်ဇင်။. ။“mask ချုပ်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် နည်းပညာ အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူက အဓိက ကတော့ ပေါ်လီပရိုပလင်း (ကော်စေ့) ကို သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့ကိုချုပ်တဲ့ အခါမှာ အပ်နဲ့ အပ်ချည်ပေါ့လေ၊ အဲဒါတွေကို မသုံးတော့ပဲနဲ့ အရည်ပျော်တဲ့ နည်းပညာပေါ့၊ အရည်ပျော်တယ်။ ကျနော်တို့ သာမန်အားဖြင့် mask တခုကို ကြည့်မယ် ဆိုရင် အပေါက်ကလေးတွေ တွေ့ရတယ်။ ချုပ်ရိုးတွေနဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်တကယ်တော့ အပ်ချည် ချုပ်ရိုးကို သုံးမထားဘူး။ အဲဒီမှာ ရှိတဲ့ ပေါ်လီပရိုပလင်း (ကော်စေ့) ပလပ်စတိတ် အမျိုးအစားကို အရည်ပျော်အောင် လုပ်ပြီးတော့မှာ အပေါက်ကလေးတွေ ဖေါက်ပြီး တော့မှ - အဲဒီ အရည်ပျော်ပြီး ပူးတွဲတဲ့ နည်းပညာ ပေါ့လေ။ အဲဒီလိုမျိုး ချုပ်စက်မျိုးတွေ လိုပါတယ်။
အဲဒီချုပ်စက်တွေကတော့ရိုးရိုး ခွဲစိတ်ခန်းသုံး နှာခေါင်းစည်း surgical mask တခုကို ထုတ်မယ်ဆိုရင် ရိုးရိုး manual အမျိုးအစားလည်း သုံးလို့ရပါတယ်။ semi- auto ဆီမီးအော်တို အမျိုးအစားလည်း သုံးလို့ ရပါတယ်။ နောက်တခုက အော်တိုမက်တစ် အမျိုးအစားလည်း သုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။”
မေး။. ။“ တကယ်လို့ ကော်စေ့နဲ့လုပ်တဲ့ ပိတ်စကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖို့ ဈေးသိပ်ကြီးမယ် ဆိုရင်ပြည်ပကနေ ကုန်ကြမ်း သွင်းပြီးတော့ ပြည်တွင်းမှာ နှာခေါင်းစည်းတွေ ချုပ်ဖို့ ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။”
ဦးအောင်ဇင်။. “ဟုတ်ကဲ့ အဲဒါက ပိုပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်တဲ့၊ လုပ်နိုင်တဲ့ အနေထား ပေါ့နော်။”
မေး။. ။“ဒါဆိုရင် ကုန်ကျစားရိတ်ကရော ဘယ်လောက်လောက် ရှိမလဲ ဆရာ။”
ဦးအောင်ဇင်။. ။“ကုန်ကျစားရိတ် ဘယ်လောက်လောက် ရှိမလဲ ဆိုရင်၊ ကျနော်တို့ ရိုးရိုး ဆာဂျီကယ် မတ်စ် တခုကို ထုတ်မယ် ဆိုရင် ကုန်ကျစားရိတ်က အော်တိုမက်တစ် စက်ဆိုရင် မြန်မာငွေ အကြမ်းဖျင်း အားဖြင့် ကျပ် သိန်း တထောင် နီးပါးလောက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ရှိပါတယ်။
နောက် ဆီမီး အော်တိုပေါ့လေ။ အော်တိုမက်တစ် မဟုတ်ပဲနဲ့ တဝက်တပျက် အလိုအလျောက် စံနစ်ကို သုံး မယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ မြန်မာငွေ သိန်း ၆ ရာ - ၇ ရာလောက် ရှိပါတယ်။
ဒီမတ်စ်ကို ထုတ်မယ်ဆိုရင်အဓိက လိုအပ်တာကတော့ တကယ်လို့ ၃ လွှာဆိုရင် ၃ လွှာကို လိုသလို ထပ်ပြီးတော့ လိုသလို ထုတ်ပေးတဲ့ sheetအချပ်ပြားထုတ်တဲ့ စက်တခု လိုပါတယ်။ အဲဒီစက်မှာ တခါထဲ နှာခေါင်းပတ် ပေါ့လေ။ nose bar ကို တခါထဲ ထည့်ပေးတဲ့ နှာခေါင်းပတ် ကိုပါ တခါထဲထည့်ပေးတဲ့ စက်တခု လိုပါတယ်။ ပြီးရင် ear loop လို့ခေါ်တဲ့ နားရွက်ကို ချိတ်တဲ့ ကြိုးလေးတွေကို ဆက်တွဲပေးဖို့စက်အမျိုးအစားလည်း လိုပါတယ်။ အဲဒါတွေကို တောက်လျှောက် တဆက်ထဲ လုပ်ပေးရင် အော်တိုမက်တစ် ဖြစ်သွားပါတယ်။ တောက်လျှောက် မဟုတ်ပဲနဲ့ တဝက်တပျက် လုပ်ပေးမယ် ဆိုရင် ဆီမီးအော်တိုမက်တစ်။ နောက် manual ဆိုလို့ရှိရင် လုံးဝ manual သုံးတာပါ။
Manual အမျိုးအစား ဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ အရင်းအနှီး ပမာဏက သိန်း ၄၀၀ - ၄၅၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက် ကုန်ကျနိုင်တဲ့ အခြေနေ ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။”
မေး။. ။“ဒီလိုဆိုရင် နှာခေါင်းစည်း ထုတ်တဲ့ စက်ရုံကို ပြည်နယ် တခုမှာ စက်ရုံ တခုလောက် တည် နိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် လုံလုံလောက်လောက် ရှိမယ်လို့ ထင်ပါသလား။”
ဦးအောင်ဇင်။. ။“ရနိုင်တဲ့ အနေထားရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် အဲဒီ စက်ရုံတွေရဲ့ အနေအထားက သူတို့ရဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်မှု စွမ်းရည်ပေါ့ production capacity အဲဒီစွမ်းရည်က တမိနစ်ကို အခု တရာနဲ့ တရာ့ငါးဆယ် ဝန်းကျင်မှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါဆိုတော့ ပြည်နယ်တခု၊ တိုင်းတခုမှာ အနည်းဆုံး စက်ရုံ တရုံစီလောက် ရှိနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီမှာ ရှိတဲ့ ပြည်နယ်လူထုတွေ အတွက်ကို ပိုပြီးတော့ သက်သာတဲ့ နှုန်းထားတွေပေါ့။ သက်သာတဲ့ နှုန်းထားဆိုတာ အခု လောလောဆယ် ကုန်ကြမ်းတွေရဲ့ ပေါက်ဈေး အရ ဆိုရင်တော့ မတ်စ် တခုကို ၃၀ - ၄၀ ပတ်ဝန်းကျင် လောက်နဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာငွေ ၃၀ ကျပ် - ၄၀ ကျပ်ပေါ့လေ။ အဲဒီ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပါ။”
မေး။. ။“ဟုတ်ကဲ့ အခုလောလောဆယ်ရော ဒီနှာခေါင်းစည်းတွေရဲ့ ဈေး ဘယ်လောက် ရှိပါလဲ။”
ဦးအောင်ဇင်။. ။“ပထမပိုင်းတုန်းက၊ ကျနော်တို့ ကိုဗစ်ဖြစ်ခါစတုန်းကတော့ နှာခေါင်းစည်း တခုကို ၇၀၀ တို့ တထောင်တို့ဖြစ်သွားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလေ။ နောက် ဒီနှာခေါင်းစည်းရဲ့ သဘာဝ ကလည်းပဲ တခါပဲ သုံးပြီး လွှင့်ပစ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မို့လို့၊့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ လက်ရှိ အခြေနေ ပေါ့လေ။ စားဝတ်နေရေး အခြေနေ အရတော့ အဲဒီ ၇၀၀- ၈၀၀ တန်ကို ဝယ်သုံးနိုင်တဲ့ အနေထားကတော့ အင်မတန် ကြီးကို ရှားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့သာ ပထမဦးဆုံး အဝတ်မတ်စ်နဲ့ အစားထိုးမယ် ဆိုပြီးတော့ အဝတ်မတ်စ် တွေကို ကျနော်တို့နိုင်ငံက လုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြတာ ပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် အဝတ်မတ်စ် ကတော့ အပြည့်အဝတော့ ကာကွယ်မှုတော့ မပေးနိုင်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခု လောလောဆယ် လက်ရှိ အနေအထားအရ ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ ဈေးက နဲနဲ ကျသွားပြီ။ ဒီ ဆာဂျီကယ် မတ်စ် တွေက။ အခုဆိုရင် အခု ၅၀ ပါတဲ့ ဘူးတဘူးကို မြန်မာငွေ ၄ ထောင်ကျပ်။ ဒီ့ထက်ပိုပြီးတော့ အမျိုးအစား ကောင်းမယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာငွေ ၅၀၀၀ - ၆၀၀၀ ကျပ် ဝန်းကျင်နဲ့ လောလောဆယ် ဝယ်လို့ရနေပါတယ်။”
မေး။. ။“အခုလောလောဆယ်မှာ အဝတ်မတ်စ်တွေ ချုပ်ပြီးတော့ အလယ်မှာ ပိုးမဖေါက်နိုင်တဲ့ အလွှာပါးကို ထည့်ရင်ကော ဘယ်လိုနေမလဲဆရာ။”
ဦးအောင်ဇင်။ ။“အဲဒါက အသုံးပြုလို့ ပိုအဆင်ပြေနိုင်မယ့် အနေထားမှာ ရှိပါတယ်၊ ဒီအဝတ်မတ်စ်ကို။
ကျနော်တို့ ဒီ ဆာဂျီကယ် မတ်စ် တခုကို ကြည့်မယ် ဆိုလို့ရှိရင်လည်း အပြင်လွှာ ပေါ့လေ။ ဒီ spun bonded လို့ခေါ်တဲ့ ပိတ်အမျိုးအစား နဲ့လုပ်ထားတဲ့ အလွှာ။ အဲဒီ အပြင်လွှာက ဘာလည်း ဆိုရင် အဓိကကတော့ အရည်စက်တွေ၊ အရည်စက် အမှုန် ပေါ့လေ။ အရည်စက်အမှုန်နဲ့ ဖုံမှုန့်တွေကို ကာကွယ်ပေးတာပေါ့။ အဲဒီ ဖုံမှုန့်တွေရဲ့ အရွယ်အစားက ၁၀ မိုက်ခရွန် လောက်ရှိပါတယ်။ အဲ ၁၀ မိုက်ခရွန်လောက်ကို ပထမ အလွှာက စစ်ထုတ် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယအလွှာကျတော့ အမှန်ဆိုရင် ၂၅ GSM လို့ ခေါ်တာ ပေါ့လေ။ ဒုတိယ အလွှာကို ၂၅ gram per square meter ပေါ့။ ဒီ ပိတ် တမီတာမှာ အလေးချိန်အားဖြင့် - ဒါက ပိတ်ရဲ့ အထူအပါးကို ဆိုလိုတာပါ။ - ၂၅ ဂရမ်လောက် အထိ လေးတဲ့ပိတ်အမျိုးအစားမျိုးကို သုံးလိုက်မယ် ဆိုရင်တော့၊ ဒီ ဒုတိယ အလွှာက ၀.၃ မိုက်ခရွန် အရွယ်အစားရှိတဲ့ အမှုန်တွေကို မဝင်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးတယ် ဒုတိယ အလွှာက။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ကြည့်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ရိုးရိုး ဆာဂျီကယ် မတ်စ် တခုက ၃၀ % အထိ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကို ပေါ့လေ။
ဆိုလိုတာက ဘာလဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ အဝတ်မတ်စ်ကိုလည်းပဲ အဝတ်မတ်စ် ၂ လွှာရဲ့ ကြားထဲမှာ - ဒီအဝတ်မတ်စ်ကတော့ ပြန်လျှော်ပြီး သုံးလို့ရတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီ ဆာဂျီကယ်မတ်စ် disposable တခါသုံး တွေကတော့ ပြန်လျှော်ပြီး သုံးလို့ မရဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီ အဝတ်မတ်စ် ၂ လွှာရဲ့ ကြားထဲမှာ layer နေရာလေး ထားပြီးတော့ အထဲထဲမှာ ကျနော်တို့ ခုနက ၀.၃ မိုက်ခရွန်လောက် အထိ အရွယ်အစားရှိတဲ့ အမှုန်တွေကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ melt blown ဆိုတဲ့ ပိတ်စ အမျိုးအစားမျိုးကို ထည့်ပြီးတော့။ အဲဒီ ပိတ်စ အမျိုးအစားမျိုးကို အလဲအဖယ် လုပ်မယ် ပေါ့လေ။ အဲလို အလဲအဖယ် လုပ်ပြီး သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည် ရှိပါတယ် ခင်ဗျ။”
ချည်မျှင်နဲ့ အထည်အလိပ် အင်ဂျင်နီယာ ဦးအောင်ဇင် ရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ပဲ ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာကဏ္ဍ ကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအန်တရာယျ. ကာကှယျရာမှာ ထိရောကျတဲ့ နှာခေါငျးစညျးတှေ မွနျမာနိုငျငံမှာ ထုတျလုပျဖို့ Polypropylene ချေါ ကျောစနေဲ့ လုပျထားတဲ့ ရကျထညျမဟုတျတဲ့ ပိတျစ အမြိုးအစား ၂ မြိုး (spun bond နဲ့ melt blown) ရဖိုလိုအပျ သလို ဒီပိတျစတှရေပွီဆိုရငျ နှာခေါငျးစညျးဖွဈအောငျ ဘယျလိုခြုပျရတယျ ဆိုတာကို Jasper Knight ကုမ်ပဏီက ခညျြမြှငျနဲ့ အထညျအလိပျအငျဂငျြနီယာ ဦးအောငျဇငျက ဒီတပတျမှာ ဆကျပွီးပွောပွပေးမှာပါ။
ဦးအောငျဇငျ။. ။“အသုံးမြားတဲ့ mask အမြိုးအစားက ၂ ခုရှိပါတယျ။ ခှဲစိတျခနျးသုံး surgical mask ဆိုတဲ့ ၃ လှာထပျထားတဲ့ အခပျြ အပွားပေါ့လေ၊ flat - mask အမြိုးအစား၊ face mask အမြိုးအစားပေါ့လေ။ နောကျတခုက ဘာလဲ ဆိုတော့ KN95 ဒါမှမဟုတျ N 95 ပေါ့လေ။ အဲဒီလိုမြိုး ၅ လှာ ထပျပွီးတော့ တကယျ့ကို ဆေးရုံလုပျငနျးတှမှော သုံးနိုငျတဲ့ mask အမြိုးအစား ဆိုပွီး ၂ မြိုး ရှိပါတယျ။ အဲဒီ ၂ မြိုးအတှကျ ထုတျလုပျဖို့ စကျတှေ ရှိပါတယျ။
မေး။. “ဟုတျကဲ့ ပွညျတှငျးမှာ mask ခြုပျမယျ ဆိုလို့ရှိရငျ သူ့ရဲ့နညျးပညာ ကရော ဆရာ၊ ဘယျလိုနညျးပညာသုံးရပါလဲ။”
ဦးအောငျဇငျ။. ။“mask ခြုပျမယျ ဆိုလို့ရှိရငျ နညျးပညာ အနနေဲ့ ကွညျ့မယျဆိုရငျ သူက အဓိက ကတော့ ပျေါလီပရိုပလငျး (ကျောစေ့) ကို သုံးထားတဲ့အတှကျကွောငျ့ သူ့ကိုခြုပျတဲ့ အခါမှာ အပျနဲ့ အပျခညျြပေါ့လေ၊ အဲဒါတှကေို မသုံးတော့ပဲနဲ့ အရညျပြျောတဲ့ နညျးပညာပေါ့၊ အရညျပြျောတယျ။ ကနြျောတို့ သာမနျအားဖွငျ့ mask တခုကို ကွညျ့မယျ ဆိုရငျ အပေါကျကလေးတှေ တှရေ့တယျ။ ခြုပျရိုးတှနေဲ့ ဖွဈနတေယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျ့တကယျတော့ အပျခညျြ ခြုပျရိုးကို သုံးမထားဘူး။ အဲဒီမှာ ရှိတဲ့ ပျေါလီပရိုပလငျး (ကျောစေ့) ပလပျစတိတျ အမြိုးအစားကို အရညျပြျောအောငျ လုပျပွီးတော့မှာ အပေါကျကလေးတှေ ဖေါကျပွီး တော့မှ - အဲဒီ အရညျပြျောပွီး ပူးတှဲတဲ့ နညျးပညာ ပေါ့လေ။ အဲဒီလိုမြိုး ခြုပျစကျမြိုးတှေ လိုပါတယျ။
အဲဒီခြုပျစကျတှကေတော့ ရိုးရိုး ခှဲစိတျခနျးသုံး နှာခေါငျးစညျး surgical mask တခုကို ထုတျမယျဆိုရငျ ရိုးရိုး manual အမြိုးအစားလညျး သုံးလို့ရပါတယျ။ semi- auto ဆီမီးအျောတို အမြိုးအစားလညျး သုံးလို့ ရပါတယျ။ နောကျတခုက အျောတိုမကျတဈ အမြိုးအစားလညျး သုံးလို့ရပါတယျခငျဗြ။”
မေး။. ။“ တကယျလို့ ကျောစနေဲ့လုပျတဲ့ ပိတျစကို ကိုယျတိုငျထုတျဖို့ ဈေးသိပျကွီးမယျ ဆိုရငျ ပွညျပကနေ ကုနျကွမျး သှငျးပွီးတော့ ပွညျတှငျးမှာ နှာခေါငျးစညျးတှေ ခြုပျဖို့ ကောငျးတယျပေါ့နျော။”
ဦးအောငျဇငျ။. “ဟုတျကဲ့ အဲဒါက ပိုပွီးတော့ ဖွဈနိုငျတဲ့၊ လုပျနိုငျတဲ့ အနထေား ပေါ့နျော။”
မေး။. ။“ဒါဆိုရငျ ကုနျကစြားရိတျကရော ဘယျလောကျလောကျ ရှိမလဲ ဆရာ။”
ဦးအောငျဇငျ။. ။“ကုနျကစြားရိတျ ဘယျလောကျလောကျ ရှိမလဲ ဆိုရငျ၊ ကနြျောတို့ ရိုးရိုး ဆာဂြီကယျ မတျဈ တခုကို ထုတျမယျ ဆိုရငျ ကုနျကစြားရိတျက အျောတိုမကျတဈ စကျဆိုရငျ မွနျမာငှေ အကွမျးဖငျြး အားဖွငျ့ ကပျြ သိနျး တထောငျ နီးပါးလောကျ ရငျးနှီးမွှပျနှံမှု ရှိပါတယျ။
နောကျ ဆီမီး အျောတိုပေါ့လေ။ အျောတိုမကျတဈ မဟုတျပဲနဲ့ တဝကျတပကျြ အလိုအလြောကျ စံနဈကို သုံး မယျ ဆိုလို့ရှိရငျတော့ မွနျမာငှေ သိနျး ၆ ရာ - ၇ ရာလောကျ ရှိပါတယျ။
ဒီမတျဈကို ထုတျမယျဆိုရငျ အဓိက လိုအပျတာကတော့ တကယျလို့ ၃ လှာဆိုရငျ ၃ လှာကို လိုသလို ထပျပွီးတော့ လိုသလို ထုတျပေးတဲ့ sheet အခပျြပွားထုတျတဲ့ စကျတခု လိုပါတယျ။ အဲဒီစကျမှာ တခါထဲ နှာခေါငျးပတျ ပေါ့လေ။ nose bar ကို တခါထဲ ထညျ့ပေးတဲ့ နှာခေါငျးပတျ ကိုပါ တခါထဲထညျ့ပေးတဲ့ စကျတခု လိုပါတယျ။ ပွီးရငျ ear loop လို့ချေါတဲ့ နားရှကျကို ခြိတျတဲ့ ကွိုးလေးတှကေို ဆကျတှဲပေးဖို့ စကျအမြိုးအစားလညျး လိုပါတယျ။ အဲဒါတှကေို တောကျလေြှာကျ တဆကျထဲ လုပျပေးရငျ အျောတိုမကျတဈ ဖွဈသှားပါတယျ။ တောကျလေြှာကျ မဟုတျပဲနဲ့ တဝကျတပကျြ လုပျပေးမယျ ဆိုရငျ ဆီမီးအျောတိုမကျတဈ။ နောကျ manual ဆိုလို့ရှိရငျ လုံးဝ manual သုံးတာပါ။
Manual အမြိုးအစား ဆိုရငျတော့ လိုအပျတဲ့ အရငျးအနှီး ပမာဏက သိနျး ၄၀၀ - ၄၅၀ ပတျဝနျးကငျြလောကျ ကုနျကနြိုငျတဲ့ အခွနေေ ရှိပါတယျခငျဗြာ။”
မေး။. ။“ဒီလိုဆိုရငျ နှာခေါငျးစညျး ထုတျတဲ့ စကျရုံကို ပွညျနယျ တခုမှာ စကျရုံ တခုလောကျ တညျ နိုငျတယျ ဆိုရငျတော့ မွနျမာနိုငျငံ အတှကျ လုံလုံလောကျလောကျ ရှိမယျလို့ ထငျပါသလား။”
ဦးအောငျဇငျ။. ။“ရနိုငျတဲ့ အနထေားရှိပါတယျ။ အဲဒီလိုဆိုရငျ အဲဒီ စကျရုံတှရေဲ့ အနအေထားက သူတို့ရဲ့ ထုတျလုပျနိုငျမှု စှမျးရညျပေါ့ production capacity အဲဒီစှမျးရညျက တမိနဈကို အခု တရာနဲ့ တရာ့ငါးဆယျ ဝနျးကငျြမှာ ရှိပါတယျ။ အဲဒါဆိုတော့ ပွညျနယျတခု၊ တိုငျးတခုမှာ အနညျးဆုံး စကျရုံ တရုံစီလောကျ ရှိနိုငျမယျ ဆိုရငျတော့ အဲဒီမှာ ရှိတဲ့ ပွညျနယျလူထုတှေ အတှကျကို ပိုပွီးတော့ သကျသာတဲ့ နှုနျးထားတှပေေါ့။ သကျသာတဲ့ နှုနျးထားဆိုတာ အခု လောလောဆယျ ကုနျကွမျးတှရေဲ့ ပေါကျဈေး အရ ဆိုရငျတော့ မတျဈ တခုကို ၃၀ - ၄၀ ပတျဝနျးကငျြ လောကျနဲ့ ထုတျလုပျနိုငျတဲ့ အနထေားဖွဈပါတယျ။ မွနျမာငှေ ၃၀ ကပျြ - ၄၀ ကပျြပေါ့လေ။ အဲဒီ ပတျဝနျးကငျြလောကျပါ။”
မေး။. ။“ဟုတျကဲ့ အခုလောလောဆယျရော ဒီနှာခေါငျးစညျးတှရေဲ့ ဈေး ဘယျလောကျ ရှိပါလဲ။”
ဦးအောငျဇငျ။. ။“ပထမပိုငျးတုနျးက၊ ကနြျောတို့ ကိုဗဈဖွဈခါစတုနျးကတော့ နှာခေါငျးစညျး တခုကို ၇၀၀ တို့ တထောငျတို့ဖွဈသှားတယျ။ မွနျမာပွညျမှာလေ။ နောကျ ဒီနှာခေါငျးစညျးရဲ့ သဘာဝ ကလညျးပဲ တခါပဲ သုံးပွီး လှငျ့ပဈရမှာ ဖွဈတဲ့ အတှကျကွောငျ့ မို့လို့၊့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ လကျရှိ အခွနေေ ပေါ့လေ။ စားဝတျနရေေး အခွနေေ အရတော့ အဲဒီ ၇၀၀- ၈၀၀ တနျကို ဝယျသုံးနိုငျတဲ့ အနထေားကတော့ အငျမတနျ ကွီးကို ရှားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့သာ ပထမဦးဆုံး အဝတျမတျဈနဲ့ အစားထိုးမယျ ဆိုပွီးတော့ အဝတျမတျဈ တှကေို ကနြျောတို့နိုငျငံက လုပျဖို့ ကွိုးစားကွတာ ပေါ့လေ။ ဒါပမေယျ့ အဝတျမတျဈ ကတော့ အပွညျ့အဝတော့ ကာကှယျမှုတော့ မပေးနိုငျဘူးပေါ့။ ဒါပမေယျ့ အခု လောလောဆယျ လကျရှိ အနအေထားအရ ကွညျ့မယျ ဆိုရငျတော့ ဈေးက နဲနဲ ကသြှားပွီ။ ဒီ ဆာဂြီကယျ မတျဈ တှကေ။ အခုဆိုရငျ အခု ၅၀ ပါတဲ့ ဘူးတဘူးကို မွနျမာငှေ ၄ ထောငျကပျြ။ ဒီ့ထကျပိုပွီးတော့ အမြိုးအစား ကောငျးမယျ ဆိုရငျတော့ မွနျမာငှေ ၅၀၀၀ - ၆၀၀၀ ကပျြ ဝနျးကငျြနဲ့ လောလောဆယျ ဝယျလို့ရနပေါတယျ။”
မေး။. ။“အခုလောလောဆယျမှာ အဝတျမတျဈတှေ ခြုပျပွီးတော့ အလယျမှာ ပိုးမဖေါကျနိုငျတဲ့ အလှာပါးကို ထညျ့ရငျကော ဘယျလိုနမေလဲဆရာ။”
ဦးအောငျဇငျ။ ။“အဲဒါက အသုံးပွုလို့ ပိုအဆငျပွနေိုငျမယျ့ အနထေားမှာ ရှိပါတယျ၊ ဒီအဝတျမတျဈကို။
ကနြျောတို့ ဒီ ဆာဂြီကယျ မတျဈ တခုကို ကွညျ့မယျ ဆိုလို့ရှိရငျလညျး အပွငျလှာ ပေါ့လေ။ ဒီ spun bonded လို့ချေါတဲ့ ပိတျအမြိုးအစား နဲ့လုပျထားတဲ့ အလှာ။ အဲဒီ အပွငျလှာက ဘာလညျး ဆိုရငျ အဓိကကတော့ အရညျစကျတှေ၊ အရညျစကျ အမှုနျ ပေါ့လေ။ အရညျစကျအမှုနျနဲ့ ဖုံမှုနျ့တှကေို ကာကှယျပေးတာပေါ့။ အဲဒီ ဖုံမှုနျ့တှရေဲ့ အရှယျအစားက ၁၀ မိုကျခရှနျ လောကျရှိပါတယျ။ အဲ ၁၀ မိုကျခရှနျလောကျကို ပထမ အလှာက စဈထုတျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
ဒုတိယအလှာကတြော့ အမှနျဆိုရငျ ၂၅ GSM လို့ ချေါတာ ပေါ့လေ။ ဒုတိယ အလှာကို ၂၅ gram per square meter ပေါ့။ ဒီ ပိတျ တမီတာမှာ အလေးခြိနျအားဖွငျ့ - ဒါက ပိတျရဲ့ အထူအပါးကို ဆိုလိုတာပါ။ - ၂၅ ဂရမျလောကျ အထိ လေးတဲ့ပိတျအမြိုးအစားမြိုးကို သုံးလိုကျမယျ ဆိုရငျတော့၊ ဒီ ဒုတိယ အလှာက ဝ.၃ မိုကျခရှနျ အရှယျအစားရှိတဲ့ အမှုနျတှကေို မဝငျနိုငျအောငျ ကာကှယျပေးတယျ ဒုတိယ အလှာက။ အကွမျးဖငျြးအားဖွငျ့ ကွညျ့မယျ ဆိုလို့ရှိရငျ ရိုးရိုး ဆာဂြီကယျ မတျဈ တခုက ၃၀ % အထိ ကာကှယျနိုငျတဲ့ အနအေထားမှာ ရှိပါတယျ။ ဒီဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှုကို ပေါ့လေ။
ဆိုလိုတာက ဘာလဲ ဆိုတော့ ကနြျောတို့ အဝတျမတျဈကိုလညျးပဲ အဝတျမတျဈ ၂ လှာရဲ့ ကွားထဲမှာ - ဒီအဝတျမတျဈကတော့ ပွနျလေြျှာပွီး သုံးလို့ရတယျ။ ကနြျောတို့ ဒီ ဆာဂြီကယျမတျဈ disposable တခါသုံး တှကေတော့ ပွနျလေြျှာပွီး သုံးလို့ မရဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီ အဝတျမတျဈ ၂ လှာရဲ့ ကွားထဲမှာ layer နရောလေး ထားပွီးတော့ အထဲထဲမှာ ကနြျောတို့ ခုနက ဝ.၃ မိုကျခရှနျလောကျ အထိ အရှယျအစားရှိတဲ့ အမှုနျတှကေို ကာကှယျနိုငျတဲ့ melt blown ဆိုတဲ့ ပိတျစ အမြိုးအစားမြိုးကို ထညျ့ပွီးတော့။ အဲဒီ ပိတျစ အမြိုးအစားမြိုးကို အလဲအဖယျ လုပျမယျ ပေါ့လေ။ အဲလို အလဲအဖယျ လုပျပွီး သုံးမယျ ဆိုရငျတော့ ပိုပွီးတော့ ကာကှယျနိုငျတဲ့ စှမျးရညျ ရှိပါတယျ ခငျဗြ။”
ခညျြမြှငျနဲ့ အထညျအလိပျ အငျဂငျြနီယာ ဦးအောငျဇငျ ရဲ့ ပွောကွားခကျြနဲ့ပဲ ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပံနဲ့ နညျးပညာကဏ်ဍ ကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။